Dell Inspiron 5570 Black (i5-8th Gen)-3 ~ ICT.com.mm
HomeDell Inspiron 5570 Black (i5-8th Gen)-3
Dell Inspiron 5570 Black (i5-8th Gen)-3
NB0020002 Intel® Core™ i5-8250U Processor 1.60 GHz 15.6″ FHD Display, 1920 x 1080 8GB DDR4 2400 MHz 2TB 5400RPM HDD Wireless Bluetooth v4.0 AMD Radeon™ 530 Graphics with 2GB GDDR53Cell,... [Learn more]
Brand: DellSKU: 69877N/ASee more: Computer Systems, Dell, Laptops / Notebooks, New Arrivals, ProductsFilter by: EDIT-TWO, Laptops (PC), outofstock, USD
Intel® Core™ i5-8250U Processor 1.60 GHz
15.6″ FHD Display, 1920 x 1080
2TB 5400RPM HDD
AMD Radeon™ 530 Graphics with 2GB GDDR5
Dell Inspiron 5570 က ဒေတာတွေအများကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ Working Professional တွေအတွက် မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းဒေတာတွေကို Laptop ထဲမှာ အများအပြားထည့်သွင်းနိုင်အောင်အထူးထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Laptop တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ CPU အဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ i5-8th Gen Processor ကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့်ပေါ့ပါးမြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေမှာပါ။ မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မျက်နှာပြင်ကို 15.6" အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Full HD Resolution ရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို တပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလျင်လျင်မြန်မြန်ပြီးမြောက်စေဖို့အတွက် RAM 8GB (DDR4, 2400MHz) ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဒေတာတွေကို အများအပြားသိမ်းဆည်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ 2TB ပမာဏအထိရှိတဲ့ HDD ကို Data Storage အဖြစ် တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ AMD Radeon™ 530 Graphics (2GB GDDR5) ဂရပ်ဖစ်ကတ်က Dedicated အမျိုးအစားဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖြစ်ပြီး NVIDIA GeForce MX 130 ဂရ်ဖစ်ကတ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တူညီတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ HD အရည်အသွေးရှိ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် Editing ပြုလုပ်နိုင်စေသလို အလယ်အလတ် PC ဂိမ်းတွေကိုလည်း သွက်သွက်လက်လက်ကစားနိုင်စေမှာပါ။ OS အဖြစ် Windows 10 Home ကို တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားလို့ Window Update Error နဲ့ License ပြဿနာတွေအတွက် ခေါင်းရှုပ်ခံနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘတ္ထရီအတွက် 3Cell, 42Whr ဘတ္ထရီကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အနက်ရောင် ကာလာ နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Laptop လေးကို စတိုင်ကျကျသယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် Carry Case အိတ်တစ်လုံးကို လက်ဆောင်ထည့်သွင်း ပေးထားပြီး Dell Mouse တစ်လုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
15-inch laptop delivering an exceptional viewing experience,ahead-turning finish and an array of options designed to elevate your entertainment, wherever you go. Waves MaxxAudio® Pro boosts volume and clarifies every tone, so you experience studio-quality sound. SmartByte channels maximum bandwidth to your videos or music foraseamless, stutter-free experience. Enjoy the crisp detail of 15.6" FHD non-touch anti-glare display to see everything better, especially outside or in bright light.
The latest Intel® Core™ i processor delivers plentiful power inacompact package. Get to your most-used files and applications inaflash with optional Intel® Optane™ Memory. A more responsive system means everything you do is faster and smoother. Everyday tasks are up to twice as responsive with 16GB Intel® Optane™ Memory. Your laptop offers multiple storage options for responsive performance and plenty of backup, including 256GB SSD and dual drives.